सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन आउदैनन विद्यार्थी : वालमन्दिरमा तीन कक्षामा तीन विद्यार्थी — Breaking News, Headlines & Multimedia
आज : २०७८ साउन १६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन आउदैनन विद्यार्थी : वालमन्दिरमा तीन कक्षामा तीन विद्यार्थी
अशोक प्राविमा ७१ मा ५७ दलित विद्यार्थी
नेत्र शाहीआषाढ १९, २०७६जुम्ला
खलंगा असार १९ गते । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी थेग्नै नसकिने धेरै जसो उदाहरण छन् । तर यहाँका केही सरकारी सामुदायीक विद्यालयमा विद्यार्थी अभावमा शिक्षकनैे दिनभर वसेर घर फर्किन्छन् ।
जुम्ला सदरमुकामको मुटुमा रहेको श्री आधारभुत विद्यालय वालमन्दिरमा सरकारले १ देखी ३ कक्षा सम्म विद्यालयको स्विकृत दिएको छ । तर विद्यार्थी नै भर्ना हुन नआउने र आएका पनि छोडने दर बढेकाले विद्यालय सकसमा रहेको छ । शैक्षिक सत्र ०७६ सालमा विद्यालयको रेकर्डमा कक्षा एकमा १३ जना, कक्षा दुईमा ६ जना र कक्षा तीनमा ३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका प्रधानाध्यापक पार्वति पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी ईसिडिमा भने २८ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । ईसिडि राम्रो संचालन भएको तर १ देखी ३ सम्म विदार्थीनै भर्ना हुन निकै कम आउने विद्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी सदरमुकाममै रहेको श्री अशोक प्रा.वि. आधारभुत विद्यालयको विद्यार्थी भर्ना नहुने र छोडने समस्या भयभह छ । विद्यालयको रेकर्डमा कक्षा १ देखी ५ सम्म ७१ विद्यार्थी छन् तर सोमवार पत्रकारहरु समाचार संकलन गर्नजादा जम्मा ४ जना विद्यार्थी मात्रै उपस्थित भएका थिए । कक्षा ५ का छात्रा १, कक्षा २ का छात्रा १ र ईसिडिका २ जना उपस्थित थिए । निजी विद्यालयहरुमा पढाउनु पर्छ भन्ने अभिभावकको सोचले सरकारीमा भर्नै नहुने र आएपछि छोड्ने दर बढेको प्रधानाध्यापक भगवति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पटक पटक मर्च गरौ भनेर वैठक भए तर सुनुवाई नभएको गुनासो छ । विद्यार्थी नहुदा हामी विद्यालयमा त्यसै वस्नु परेको एक शिक्षिकाले गुनासो सुनाउनुभयो ।
दलित विद्यार्थीले धानेको विद्यालय ः
चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं ४ मा रहेको उक्त अशोक प्रावि आधारभुत विद्यालयमा दलित, गरिव र जेहेन्दार विद्यार्थीहरु भने भर्ना हुने गरेका छन् । नगरपालिकाको वडा नं ४ अन्तरगतको सिंगाचौरमा रहेको दलित बस्तिका वालवालिकाले विद्यालय धानेको छ । जम्मा भर्ना भएका ७१ विद्यार्थी मध्य ५७ जना दलित विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयले जानकारी दिएको छ । जसमा २६ दलित केटा र ३१ दलित विद्यार्थी केटी रहेका छन् । कापी, कलम, स्टेशनरी दिन्छौ तर भर्ना हुदैनन् प्रअ श्रेष्ठले थप्नुभयो । यसैगरी भर्ना अभियानमा पनि व्यापक सूचना तथा घरदैलो गरेपनि आउदैन, थप्नुभयो ।
सो अशोक आधारभुत विद्यालयमा शिक्षक भने प्रा.वि. दरवन्दीका ५ जना र ईसिडि एक जना गरी ६ जना रहेका प्रअ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यता बालमन्दिर आधारभुत विद्यालयमा भने प्रावि दरवन्दीका दुई र एक आन्तरिक शिक्षक रहेको प्रअ पार्वति पौडेलले जानकारी दिनुभयो । शिक्षककै छोराछोरी वोडिङ्गमा पढाउने गरेकाले र जथाभावी निजी स्कुल खोलेकाले विद्यालयमा विद्यार्थी घटेका उहाँको भनाईछ ।
तीन कक्षामा तीन विद्यार्थी ः
आधारभुत विद्यालय वालमन्दिरमा पनि कक्षा तीनमा ३ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । सर्मिला रावल सहित तीन जनाले ३ कक्षा धानेको विद्यालयले जनाएको हो ।
सदरमुकाममै यस्तो समस्या भएपनि सरोकारवाला निकायहरु मौन रहेका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ, नगरपालिकाले पनि यो बिषयमा एक्सन नलिदा यि विद्यालयहरु गुनासोको पोको हुदै आएका छन् । स्थानीय रामसिंह रावलले जुम्ला सदरमुकाममै यो समस्या भएपनि सरोकारवाला निकायहरु मौन भएको आक्रोस पोख्नुभयोे । चन्दननाथ नगरपालिकाले भने मर्च गर्नका लागि कार्यदल बनाईसकिएको बताएको छ । मेयर कातिन्का सेजुवालले यसको चाडै टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिकामा एक उपसचिव, एक विनि र एक प्रासको दरवन्दी भएपनि कोही पनि आउन नमानेकोले शिक्षा क्षेत्र संचालनमा कठिन भएको बताउनुभयो । यता शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइले आफ्नो भूमिका कम भएको बताएको छ ।
चन्दननाथका उपमेयरको पत्रकार भेटघाट : मेयरले नगरपालिकालाई वन्दी बनाईन !
सुर्खेतका भूमिहिन् बादी समुदायलाई खाद्यान्न सहयोग
कृषिमन्त्री शाहीः उत्कृष्ट कृषकलाई सुनको हलो प्रदान गर्छौं (फोटोफिचर)
अव कर्णालीमा “सेतो हिउँमा सेतै एप्रोनधारी चिकित्सक”
प्रहरीद्वारा ४० लाख २६ हजारको अवैध मालसमान बरामद
शिक्षक महासंघको ३४ बुद्धे माग, जुम्लामा आठ घण्टा रिले अनसन
ईलाका प्रशासन सिञ्जामा साढे आठ हजार बढि नागरिकता वितरण
उपकुलपति निवासमा तोडफोड गर्नेमाथि कारबाहीको काम